Ukuhlala kwifama enoxolo kwikhabhathi yelog yaseShropshire.
Ellesmere , Shropshire, United Kingdom
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguRosemary
Siyifama yaseMntla Shropshire kunye nomhlambi weegusha zeLlanwenog ezili-100. Sikwanazo neendawo zokumisa kunye neepaddokhi ukuya kuthi ga kwi-12 yamahashe kwiyadi yethu ye-DIY livery. Le yindawo esemaphandleni kakhulu enefama ezininzi zosapho ezincinci.
PHAKATHI KWEENDLITHI, SIZA KUCOCA FUTHI SIYIHLANISE IPROPATI
KWAYE USHIYE UBUNCINANE IINTSUKU EZI-3 PHAKATHI KOndwendwe NGALUNYE.
IsiNgesi uFrankton yilali yakudala edweliswe kwincwadi yeDoomsday. Kumgama nje onesiqingatha seyure ukusuka kwisixeko samandulo saseShrewsbury esibonelela abatyeleli ngothotho lweendawo zokundwendwela ezinje ngeCastle, iAbbey (ichazwe ngokubanzi nguEllis Peters kwiincwadi zakhe ezingeyonyani ezingoCadfael, imonki yomcuphi), ngokunjalo. njengeevenkile kunye neeresityu.
Umjelo waseShropshire okufutshane e-Ellesmere ubonelela ngokuhamba kunye nokuqesha isikhephe semini okanye kutheni ungaqeshi ibhayisekile ukusuka kwibhayisekile yaseMere kwaye ujonge amaphandle ajikelezileyo kunye neendlela zokutsala umjelo.
Ukuba unqwenela into enzima ngakumbi kutheni unganyuki encotsheni yeWales, i-Snowdon, ekumgama weyure ezi-2 kuphela xa uqhuba okanye uye emazantsi kwiinduli zaseShropshire kunye neLong Mynd okanye isihlenga samanzi amhlophe ezantsi ngomlambo iDee eLlangollen.
Emva koko kukho iPontcysyllte aqueduct, owona mjelo wamanzi omde eGreat Britain kunye nowona mjelo uphakamileyo wemijelo emhlabeni.
Ngokufutshane kukho inkitha yemisebenzi yokwenza kule ndawo intle yaseNgilani.
ILoppington yeyona dolophana yethu ikufutshane apho unokonwabela isidlo okanye izimuncumuncu kwiDickin Arms. Inokuphela kweringi yenkomo eseleyo eMantla eShropshire eyayisetyenziselwa ukuhlamba iinkunzi kude kube yinkulungwane ye-19.
I-Cockshutt imalunga neekhilomitha ezi-2 kude kunye neLeaking Tap yendlu kawonke-wonke ebonelela ngokutya kunye nokuhlaziya.
Umbuki zindwendwe ngu- Rosemary
I come from a farming background, I love the rural lifestyle and I enjoy hosting guests on our small farm.
Sifumaneka ixesha elininzi njengoko singabalimi abasisigxina ngoko ukuba uneengxaki okanye imibuzo sihlala sithetha ngayo ndaweni ithile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ellesmere